1 Makoronike 10 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
1 Makoronike 10:1-14
10 Zvino vaFiristiya+ vakarwa nevaIsraeri; uye varume vaIsraeri vakatiza vaFiristiya, vakaramba vachiwa vaurayiwa muGomo reGiribhoa.+ 2 VaFiristiya vakaramba vakati namename naSauro nevanakomana vake; uye vaFiristiya vakauraya Jonatani+ naAbhinadhabhi+ naMariki-shua,+ vanakomana vaSauro.+ 3 Kurwa kwakakurira Sauro; uye vaya vaipfura nouta vakapedzisira vamuwana, akakuvadzwa nevapfuri vacho.+ 4 Sauro akabva ati kumutakuri wezvombo zvake:+ “Vhomora bakatwa rako+ undibaye naro, kuti varume ava vasina kudzingiswa+ varege kuuya vakandiitira zvakaipa.”+ Asi mutakuri wezvombo zvake akanga asingadi,+ nokuti aitya kwazvo. Naizvozvo Sauro akatora bakatwa racho, akawira pariri.+ 5 Mutakuri wezvombo zvake paakaona kuti Sauro akanga afa, iyewo akabva awira pabakatwa akafa.+ 6 Nokudaro Sauro nevanakomana vake vatatu vakafa,+ uye vose veimba yake vakafa pamwe chete. 7 Varume vose vaIsraeri vaiva mubani pavakaona kuti ivo vakanga vatiza, uye kuti Sauro nevanakomana vake vakanga vafa, vakabva vabuda mumaguta avo vakatiza;+ vaFiristiya vachibva vazopinda vakagara maari. 8 Zvino pazuva rakatevera, vaFiristiya pavakauya kuzopfekenura+ vakanga vaurayiwa, vakawana Sauro nevanakomana vake vakafira muGomo reGiribhoa.+ 9 Vakamupfekenura, vakagura musoro wake,+ vakatora zvombo zvake zvehondo, vakazvitumira munyika yevaFiristiya kumativi ose kuti vazivise+ zvidhori+ zvavo nevanhu vacho. 10 Vakazoisa zvombo zvake muimba yamwari wavo,+ vakaroverera dehenya rake paimba yaDhagoni.+ 11 Zvino vanhu vose vokuJabheshi+ riri muGiriyedhi vakanzwa zvose zvakanga zvaitirwa Sauro+ nevaFiristiya. 12 Naizvozvo varume vose vaiva vakashinga vakasimuka, vakatakura chitunha chaSauro nezvitunha zvevanakomana vake, vakaenda nazvo kuJabheshi, vakaviga mapfupa avo pasi pomuti mukuru+ uri muJabheshi;+ uye vakatsanya+ kwemazuva manomwe. 13 Nokudaro Sauro akafira kusatendeka kwake kwaakanga aitira Jehovha nokusatenda kwake+ shoko raJehovha raakanga asina kuchengeta uyewo nokuda kwokukumbira svikiro+ kuti rimubvunzire. 14 Haana kubvunza Jehovha.+ Naizvozvo iye akamuuraya, akapa Dhavhidhi mwanakomana waJese umambo.+